Gare gare, simbi yangu yenyika kupinza kunze kwenyika inogona kuratidza "yakapetwa kaviri" pateni - China Foshan Hermes Simbi
Gare gare, simbi yenyika yangu kupinza kunze kwenyika uye kuratidza kunze kunogona kuratidza "yakapetwa kaviri" pateni
Zvinoenderana neazvino manhamba kubva kuGeneral Administration yeCustoms, nyika yangu yakaburitsa matani emamirioni 7.542 esimbi munaKurume, gore-gore-gore kuwedzera kwe16.5%; uye kuunzwa matani miriyoni 1.322 esimbi, gore-ne-gore kuwedzera kwe16.3%. Mumwedzi mitatu yekutanga, nyika yangu yakatumira kunze matani mamirioni 17.682 ezvigadzirwa zvesimbi, gore-gore-gore kuwedzera kwe23.8%; kuwedzerwa kupinzwa kunze kwezvinhu zvesimbi zvigadzirwa zvaive mamirioni 3.718 emamiriyoni, gore-ne-gore kuwedzera kwe17.0%.
Chimwe chezvinyanya kunetsa ndechekuti nyika yangu yesimbi inotengeswa kunze kwenyika munaKurume yakawedzera nemamiriyoni 2.658 ematani kana ichienzaniswa naFebruary, kuwedzera kwe54.4%, ichiisa nyowani nyowani yepamusoro yekutengesa simbi kubva muna Kubvumbi 2017.
Mukufunga kwemunyori, pamwe nekuwanikwa kwesimbi yenyika yangu, kunze kwenyika yesimbi uye kunze kwenyika zvinogona kuratidza "yakapetwa kaviri" patani munguva inotevera. Iyo "yekutanga yepamusoro" inoratidzwa nevhoriyamu: huwandu hwese hwesimbi inotengeswa kunze kwenyika uye kunze kwenyika kucharamba kuri padanho repamusoro; iyo "yechipiri yepamusoro" inoratidzwa nehuremu hwekukura, uye simbi inopinza kunze kwenyika uye kunze kwenyika kuchachengetedza huwandu hwakakura hwekukura mukati megore. Zvikonzero zvikuru zvinotevera:
Chekutanga, pasi peiyo kumashure kwekabhoni yepamusoro uye kusarerekera kabhoni, matunhu angu makuru anoburitsa simbi akagadzirisa mitemo yekudzivirira zvakatipoteredza, zvichikonzera kudzikira kwakadzikira mukuwanikwa kwezvigadzirwa zvesimbi zvakadai semabhiridha uye simbi yekuzvambura. Pasi pemamiriro aya, mhiri kwemakungwa zvigadzirwa zvesimbi zvakafashamira mumusika wepamba. Izvi zvinogona kuoneka kubva kune ichangoburwa hombe yekutengeswa kweVietnamese simbi mabhegi kuChina.
Munhu akakodzera anotungamira mubatanidzwa wemaindasitiri akambotaura kuti zvinokurudzira kuwedzera kwekuunzwa kwezvigadzirwa zvepamberi zvakaita semabhero esimbi uye zvinopa kutamba kuzere kune basa remusika wekunze mukuona kuwanikwa kwemusika wepamba. Munyori anotenda kuti kuunzwa kwezvigadzirwa zvesimbi zvekutanga zvichave zvakajairwa mune ramangwana, izvo zvinowedzera kukurudzira kukura kwesimbi yenyika yangu inopinza kunze.
Chechipiri, musiyano wemutengo pakati pemisika yepamba neyekunze inopa mamiriro akanaka kune epamhepo simbi kunze kwenyika. Nekudzoreredzwa kwekudiwa mumisika yemhiri kwemakungwa, mitengo yesimbi yepasi rose yakawedzera zvakanyanya, uye musiyano wemutengo nezvigadzirwa zvesimbi zvemumba zvawedzera. Tora HRC semuenzaniso. Parizvino, iwo muhombe mutengo weHCC mumusika weUS wasvika US $ 1,460 / ton, yakaenzana neRMB 9,530 / ton, nepo imba yeH HRC ingori ingangoita zviuru zvishanu zveYuan / ton. Nekuda kweizvi, kuendesa kunze kwesimbi kunobatsira. Munyori anofungidzira kuti makambani esimbi anomhanyisa kuronga kwekutumira kunze kwenyika mune inotevera nhanho, uye huwandu hwekunze hwezvigadzirwa zvesimbi zvicharamba zvakakwirira munguva pfupi.
Parizvino, chikuru kusava nechokwadi chinhu iko kugadzirisa kwesimbi yekunze mutero wekudzosera mutero. Kana mutemo uyu uchizadzikiswa parizvino hauna kugadziriswa. Nekudaro, munyori anotenda kuti hazvigone kuti mutero wesimbi wekutumira kunze simbi ugo "bvisiswa" zvakananga, asi "kurongedzwa zvakanaka" kubva parizvino 13% kusvika kungangoita 10% kungave chiitiko chakakura kwazvo.
Mune ramangwana, chimiro chemidziyo yesimbi inotengeswa kunze kwenyika ichaenda padhuze neakakwira-akawedzera zvigadzirwa, uye kunze kwenyika kwesimbi kunopinda "nhanhatu nhanhatu" nhanho ye "mhando yepamusoro, yakakwira kukosha yakawedzerwa, uye yakakwira vhoriyamu" kuvhara mutengo yemitero yemitero kugadziridzwa.
Kunyanya, huwandu hwekunze hwezvakakosha simbi zvigadzirwa zvichawedzera kuwedzera. Iyo data inoratidza kuti emamiriyoni emamiriyoni makumi mashanu neshanu neshanu esimbi inotumirwa kunze kwenyika yangu mu2020, mabara newaya zvakaverengerwa 12.9%, angles uye chikamu simbi inosvika 4.9%, mahwendefa ane 61.9%, mapaipi akaenzana ne13.4%, uye imwe simbi mhando dzakanangana neiyo ratio yakasvika 6.9%. Pane izvi, 32,4% ndeye yakasarudzika simbi. Munyori anofungidzira kuti mune ramangwana, pasi pesimba rekugadziriswa kwemutemo wekuteresa mutero kunze kwenyika, huwandu hwezvinhu zvakakosha zvesimbi zvigadzirwa kunze kwenyika zvichawedzera kuwedzera.
Saizvozvowo, kutengeswa kwesimbi kucharatidza maitiro e "kuwedzera nekukurumidza muhuwandu hwezvigadzirwa zvekutanga zvinotengeswa kunze kwenyika uye kuwedzera kwakasimba kwezvinhu zvekupinza simbi yepamusoro". Sezvo kutsvagurudza kwepamba uye kusimudzira kwesimbi yepamusoro-soro kuri kuramba kuchikura, huwandu hwesimbi-yekupedzisira simbi inopinza simbi inogona kudzikira. Dzimba dzemakambani emakambani anofanirwa kugadzirira zvizere izvi, kugadzirisa chimiro chigadzirwa munguva, uye kutsvaga mikana yekuvandudza mune inochinja maitiro ekupinza nekutengesa kunze.